ဒုက္ခသည်တစ်ဦးသို့မဟုတ်လူဝင်မှုအဖြစ် US မှာအခွန်ပေးဆောင်ဖို့ကိုဘယ်လို | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
Taxes are amounts of money people contribute to the costs of runningacountry or community. ဥပမာ, အခွန်ကျောင်းများအတွက်ပေးဆောင်, ဆေးရုံများ, and roads.When citizens and green card holders pay taxes, they are paying their share of programs that benefit them.
သငျသညျအခှနျကြွေးသို့မဟုတ်အစိုးရကသင်ပေးဆပ်ရန်ရှိမရှိ, it is your responsibility to know when and how to pay taxes . You must send your tax return for the previous year to the government before April 15 every year. သင့်အနေဖြင့်အစိုးရပုံနှိပ်ပုံစံပေါ်တွင်သင်၏အခွန်ပြန်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါပုံစံများကိုအလွန်ရှည်လျားဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင့်ဝင်ငွေနှင့်အသုံးစရိတ်အကြောင်းအသေးစိတ်စာရေးတောင်း.
သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးမဟုတ်ရင်တောင်, အစိုးရကလိုအပ်သူတွေကိုကူညီဖို့ program တစ်ခုရှိပါတယ်. အဆိုပါ Volunteer Income Tax Assistance (Vita) အစီအစဉ် offers free tax help to people who earn $54,000 တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း, မသန်စွမ်းလူဦး, နှင့်ကန့်သတ်အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူလူများတို့အား. You can quickly find the nearest help by using the VITA locator. အတော်များများသောအရပ်တို့ကိုစပိန်အတွက်အကူအညီပူဇော်, အဘိဓါန် Arabic, တရုတ်နှင့်အခြားဘာသာစကားများ.